China Hexapeptide-11 fekitari uye vagadziri | JYMed
Product zita: Hexapeptide-11
Molecular Weight: 676,815 g / mol
Mafomu: kunoderedza mitsetse akanaka uye wrinkles, firming ganda
Hexapeptide-11 akazoita chitarisiko mitsetse akanaka uye wrinkles, kuita izvi rakaisvonaka kuwedzera ose ganda kuchengetwa uye Anti-kukwegura zvigadzirwa. It ane yakasiyana akagadzirwa amino acids kuti anobatsira recreate yevashoma zhinji yakawanikwa majini mukati mumuviri womunhu, kuubvumira havarongi collagen nhanho uye rinowedzera elasticity paganda.
chigadzirwa ichi wakachena upfu pamwe kwomwoyo> 95%. No Excipients, preservatives, Anti-oxidants chipo, kana kushandiswa panguva mukugadzira rikurumidze. Zvinonzi 100% synthesized mu murabhoritari saka haana kubatanidzwa pamwe chirimwa, muriwo, kana zvomumvura. Hakuzi muchanza hwokurara kana zvikasiyanasiyana sourced.